काठमाडौँ, ३ माघ । कृषि विकास बैंक न्युरोड शाखाकी सहायक टेलर नागार्जुन–१ की ३२ वर्षीया दीपिका रेग्मी ४ करोड ९१ लाख रकम हिनामिना मुद्दामा समातिइन् । प्रहरीले अनुसन्धान थाल्यो । खुल्यो, घटनाको मुख्य योजनाकार उनी नै रहिछिन् । प्रहरीका लागि हिनामिना भएको रकम पनि खोज्नुपर्ने चुनौती थियो । प्रहरी अनुसन्धानमा लाग्यो । ‘नेक्सस’ पहिल्याउँदै जाने क्रममा करिब ३३ लाख रुपैयाँ सेनाका सहायक रथी डा. रमेश विष्टको बैंक खातामा भेटियो । प्रहरी चकित खायो । अब प्रहरीको अनुसन्धान सहायक रथी डा. विष्ट र रेग्मीको सम्बन्धमा केन्द्रित भयो ।\_
पक्राउ परेका रेग्मीसहितका तीनैजनामाथि बैंकिङ कसुर ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाइएको छ । सिआइबीका प्रवक्ता एसपी श्रेष्ठले भने, ‘कृषि विकास बैंक न्युरोड शाखामा रकम अपचलन भएको खुलेपछि अनुसन्धान सुरु भयो । यसक्रममा दीपिका रेग्मी पक्राउ परिन् । अनुसन्धान हुँदा रेग्मी नै यसको मुख्य योजनाकार रहेको खुल्यो । उनकै बयानका आधारमा अन्य पनि दोषी देखियो । र, पक्राउ परे ।’ रेग्मी बैंकमा सहायक ट्रेलरका रूपमा कार्यरत थिइन् । नयाँपत्रिकामा खबर छ ।
सेनाका सहायक रथीclose
ओली र प्रचण्डका विश्वासपात्र जनार्दनलाई आउट गर्न को–को लागे ?
सहजनाथ वन अनियमितता: ‘डीएफओसहित सबै कर्मचारी दोषी’
धरहरा दोहनमा महानगर मौन
रातो पासपोर्टमा ‘कडाई’
प्रहरीकै आडमा फेरि तामाकोसी उत्खनन्
अमेरिकाले दियो चीनलाई यस्तो धम्की
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित २० मन्त्रीले अझै सम्पत्ति सार्वजनिक गरेनन्
पुर्व प्रेमीले ब्ल्याकमेलिङ गरेपछि…
नेपाली स्पिनर सन्दीप लामिछानेले आज मुम्बई इन्डियनविरुद्ध बलिङ गर्ने